Ny paikady dia avy amin'i Gameloft miaraka amin'ny Siege | Androidsis
Siege, ilay vaovao avy amin'ny paikady style Clash of Clans
Efa nifankahita vao haingana izahay ny tombom-barotra mahavariana izay angonin'ny Clash of Clans isan'andro mandalo. Satria manana akohovavy mametraka atody volamena eny an-tànany izy, misy fandalinana maro sy orinasa mandefa lalao mitovitovy amin'izany, na dia misy lohahevitra samihafa aza, izay manandrana mifaninana sy mangalatra azy. Ary ny tena izy dia Ny Clash of Clans dia mitohy mivezivezy malalaka an-tsokosoko amin'ity sokajy ity an'ny videogames izay ilainao hananana fahalalana momba ny paikady, fananganana toby ary raha manana toekarena kely amin'ny endrika euro ianao, dia mihatsara hatrany.
Siege no filokana vaovao Gameloft azo alaina ao amin'ny Play Store manandrana mifaninana amin'ny anaram-boninahitra Supercell. Lalao video nahasarika ny sain'ny mpijery raha naseho tamin'ny E3 2015 farany teo noho ny sary avo lenta sy ny fomba fanentanana lava. Ny mazava dia raha te hangalatra ny gisa mametraka atody volamena amin'i Supercell ianao dia tsy maintsy mahita zavatra manatsara ny tsy zaka, ary mety hiatrika ny iray amin'ireo fanandramana akaiky indrindra amin'izany izahay tato anatin'ny volana vitsivitsy.
1 Gameloft Siege
2 Kalitao teknika miavaka
Raha manana lamaody ny lamaody na ny fironana, dia ny fandefasana filokana samihafa saingy misy fitoviana maro. izany Azontsika atao ny milaza azy io amin'ny fitsanganan'ny PC miaraka amin'ireo MOBA izay manome ny azy rehetra ary eo no ahitantsika ny League of Legends, DOTA na ilay Blizzard Heroes of Storm vaovao izay mahavariana ny mponina sy ny vahiny.
Toy izany koa no mitranga amin'ny lalao video ho an'ny finday mitovy amin'ny Clash of Clans sy izany Miorina amin'ny fametrahana fototra hananganana azy ireo izy ireo, ampivoariny amin'ny toetra ary avy eo mandefa miaramila avy ao Mpiady mpiady maro be izay hiatrika mpilalao samihafa manerana an'izao tontolo izao.
Ny tanjona amin'ny Siege na Siegefall dia raiso ny fifehezanao ny armada misy anao tafika manokana hanandrana handresy ny faritra rehetra amin'ny sari-tany. Ny tafikao dia misy rogues, troll, knights, ary na dia mahery fo iray aza, izay mazàna goavambe manana fahefana bebe kokoa noho ny hafa ao amin'ny tafikanao. Mitovy amin'ny lalao hafa toa ilay voalaza.
Kalitao teknika miavaka
Ary tsy mila hanafika faritra hafa fotsiny isika, fa hanana adidy hiaro ny fanjakantsika ihany koa isika eo am-pananganana toeram-pitrandrahana, toeram-pitrandrahana ary toeram-piompiana hitazomana ny tafikay ho matanjaka sy hanohy hamolavola ny fotony.
Ny iray amin'ireo safidy hafa ankoatry ny hafa amin'ny fomba dia ny karatra majika izay hanome antsika hery manokana handefa vato afo manimba, mangatsiaka ny fahavalo na miantso ny afon'ny dragona. Ao amin'ny Clash of clans dia manana safidy mitovy amin'ny atolotry ireo karatra ireo miaraka amin'ny potion isika, noho izany dia hitantsika fa miharihary ny fampitahana.
Raha misy zavatra afaka manavaka ny fahirano, dia ny sary mahavariana ary ny asa tsara nataon'i Gameloft, iray amin'ireo studio mamokatra be indrindra izay mazàna mandefa lalao video maro ho an'ny fitaovana finday. Ho an'ny ambiny, raha zatra an'ity karazana lalao ity ianao dia tsy ho ela dia hihazona ity Siege vaovao ity. Azo alaina maimaimpoana amin'ny Play Store miaraka amin'ny micropayments miandry ny hovidiana ho mahery indrindra eto ambonin'ny tany.
Ny sary mahavariana / li>
Kalitao tsara amin'ny ankapobeny
Iray hafa amin'ity karazana ity
Siegefall: Fahalavoan'ny fanjakana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Siege, ilay vaovao avy amin'ny paikady style Clash of Clans
[APK] Ny rindranasa rehetra an'ny Asus Zenfone 2 (3): Mpikirakira rakitra ary mailaka Asus an'ny Asus Zenfone 2